Quaint Little S.C Apartment @Ixabiso elikhulu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWill
Indawo yokuhlala yasePost House isekwe kwindawo entle yaseWaringstown, indawo efanelekileyo yokukhenketha intliziyo yaseIreland ephuma kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi ngaphakathi kweyure ezimbini. IiGiants Causeway, Belfast, Titanic Exhibition Centre, Antrim Coast Drive, Game Of Thrones Studio Tour, Banbridge, Lough Neagh, Mournes ukukhankanya nje ezimbalwa.
Indlu etofotofo inamagumbi amabini okulala (indawo yokulala ye-4), igumbi lokuhlambela eli-1 kunye negumbi lokuhlala / lokutyela elibanzi. Ime kumbindi welali ejonge kwi-17th Century Waringstown Mansion eyakhiwe nguWilliam Waring kungoko igama elithi Waringstown.
Zonke izinto eziluncedo zikumgama wemizuzu eli-10 ukusuka kwindlu kodwa ibhrari, ivenkile yemifuno kunye nePost House Coffee Shop ingaphakathi kwendawo.
IWaringstown ikulungele ukuthengisa iidolophu, iLurgan, iBanbridge kunye neMoira. Ikwafanelekile kwiArmagh iCathedral City yaseIreland, izixeko zaseNewry naseLisburn kwaye ikumgama oziikhilomitha ezingama-25 kuphela ukusuka kwikomkhulu laseBelfast. Kukho indawo yokumisa ibhasi yasekhaya ukuya kwiindlela eziya eLurgan okanye eBanbridge.
Okwangoku kukho umboniso okhenkethayo wempahla enxitywayo kuMdlalo weetrone kunye neeprops ezisetyenziswa kulo lonke uthotho; okwangoku kumboniso wexesha eliqingqiweyo kwiziko leTitanic eBelfast (45mins) kude kube ngunyaka ozayo
Ngentwasahlobo ka-2020 iza kusondela ekhaya eLinen Mill Studios, eBanbridge(imizuzu eli-15 yohambo) kude kakhulu kulonwabo lwethu.
Kuza kwakamsinya ngo-2020 amava omdlalo wangaphandle owahlukileyo obalaseleyo kulo lonke usapho eGosford Forest Park (eyokuqala yohlobo lwayo kwisiqithi saseIreland esingaphandle kwenye idolophu yentengiso eMarkethill kwi-County Armagh, nje imizuzu engama-30 kude.
Kwakhona ngo-2020 i-buzz ejikeleze apha kukuba iziko elitsha lokuzonwabisa (elona likhulu eIreland) elakhiwayo liya kuba nazo zonke iimeko zoomatshini bobugcisa bazo zonke iimfuno zakho zempilo kwaye liya kuba likhaya kwi-8 lane 50 meter pool yokuqubha, amachibi abantwana. kunye negumbi lezempilo kunye nobuhle elibekwe eCraigavon (15mins kude)
Kukhangeleka ngathi ngo-2020 bebekunyango kwaye ndiyathemba ukuba unokuhlala kakuhle kunye namava e-Post House Apart. D
4.74 · Izimvo eziyi-126
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waringstown